जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको निर्वाचन गर्न अझै केही समस्या देखिएको छ : मुनिन्द्र नेम्बाङ,महासचिव - Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल ३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १४:०७
नेपाली काँग्रेसको विदेश स्थित भातृ संस्था जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको नियमित निर्वाचन २२ महिना अगाडि नै हुनु पर्ने हो । तर एकले अर्को पक्षलाई छिर्के हान्ने र ‘जुगाँको लडाई’ ले नेपाली राजनीतिको पुरानो र लोकतान्त्रिक दावी गर्ने काँग्रेसको भातृ संगठन विधान विपरित २२ महिना सन्चालन भयो । माँउ पार्टी काँग्रेसले हालै मात्र विधान अनुसार कार्यकाल सकिएका आफ्ना भातृ संगठनलाई ६ महिना भित्रमा अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विवादमा नै कार्यकाल गुजारेको जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले पार्टीको निर्देशनलाई कसरी लिएको छ ? अब पनि समयमा नै अधिवेशन गराउन वर्तमान समिति सक्षम र तयार छ ? भन्ने शंका पनि व्याप्त छ । यसै सेरोफेरोमा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका महासचिव मुनिन्द्र नेम्बाङ सँग दूरबिन नेपालले टेलिफनमा गरेको कुराकानीको संक्षेप यहाँ प्रश्तुत गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो निर्देशन पछि, जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले अधिवेशन गराउने सम्वधमा के के गर्दै छ ?
अधिवेशनका लागि काम कारवाही अगाडि बढाउनु भनेर केन्द्रले पठाएको छ । अब हामी अधिवेशन तर्फ लाग्छौं । तर यहाँ दुई – तीन वटा समस्या देखिएका छन् । क्रियाशिल सदस्यता वितरण सम्वन्धी के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन पार्टीले, तर च्याप्टरका अधिवेशनहरु हामी तुरुन्त शुरु गरिहाल्छौं । त्यसका लागि केही दिनमा नै केन्द्रिय समितिको बैठक बस्दै छ । च्याप्टर, केन्द्रिय अधिवेशनको स्थान र मिति तोकेर अगाडि बढ्दै छौं ।
काँग्रेसको नयाँ विधानमा जनसम्पर्क समितिको सदस्यताका लागि योग्न हुन नेपाली राहदानी नै हुने पर्ने भन्ने नयाँ बाध्यता थपिएको छ । त्यसको कार्यन्वयन कसरि गराउदै हुनुहुन्छ ?
हामीले पहिले देखि भनेको कुरा के हो भने काँग्रेसको स‌ंसोधित विधान अनुसार विषेश गरि अमेरिका र युरोपमा संगठन गर्न गह्रो छ । यो बारेमा पार्टीका नेताहरु सँग पनि कुरा गरेको हो । हाम्रो भनाई के भने यहाँ संगठन विस्तार गरिन्जेल चुप्प लागेर गरिदिनुस अब केन्द्रिय प्रतिनिधि, पार्टीको मतदाताअधिकार सहितको प्रतिनिधि छान्दा पार्टीको विधान पूर्णरुपमा नै कार्यन्यन गरिदिने हो कि भनेर कुरा गरिएको छ । तर ति कुरा हरु पनि प्रष्ट रुपमा आएको छैन । अब विस्तारै आउला । पाँच जनाको कमिटी बनाएको छ । त्यो कमिटीले सबै कुरा समेट्ने गरि नियम, विनियम बनाएर पठाइ दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
पार्टीले स्पष्ट नपार्दा तपाईहरुलाई अप्ठेरो भएको हो अधिवेशन गर्न ?
होइन होइन त्यसैले त अप्ठेरो भएको छैन । त्यो त केन्द्रिय अधिवेशनको कुरा भयो, च्याप्टर अधिवेशनका लागि अब मिति तय गरेर, यहाँको सदस्यता वितरण देखि लिएर अन्य कुरा मिलाएर हामी अगाडि बढ्छौं । च्याप्टर सभापति सँग पनि बैठक राख्छौं ।
च्याप्टर अधिवेशन गर्न पनि त पहिला क्रियाशिल सदस्यता त वितरण गर्नु पर्यो नी होइन र ? क्रियाशिल सदस्यता नै नभइ कसरी अधिवेशन हुन्छ त ?
त्यो चै हो तर पहिला बिष्णुजीको पालामा (बिष्णु सुवेदी, पूर्वसंयोजक) पनि पछि मात्र क्रियाशिल सदस्यता वितरण गरेको हो । यसमा दुई वटा पाटो छ । पहिला यहीको जनसम्पर्क समितिको सदस्यता वितरण गर्ने,अनि त्यसमा कति केन्द्रिय प्रतिनिधि हुन्छन तीनले क्रियाशिल सदस्यता लिने प्रावधान थियो पहिला बिष्णुजीको पालामा हामीले त्यो तरिकाले वितरण गरेर गरेका हौं । त्यो पनि एउटा उपाय हुन सक्दछ । तर पनि हामी पार्टीलाई अनुरोध गरेर क्रियाशिल सदस्यता अहिले देखि नै वितरण गर्नु पर्यो भन्ने र पार्टीले पनि पठाएमा दोहोरो झनझट नभइ एकै पटक काम सकिने थियो । त्यो बारेमा पनि पाँच जनाको जुन कमिटी छ त्यसले केही न केही बनाउला ।
अधिवेशनको मिति कहिले सम्म तोक्नु हुन्छ त ?
अब हामी शनिवार बैठक बस्दै छौं । पहिलो चरणमा च्याप्टरको कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्छौं । च्याप्टरहरुको स्थिति कस्तो छ । को कति सक्रिय छन् कति निश्क्रिय छन् त्यो सबै मुल्याङ्कन गर्छौ त्यस पछि अग्रजहरु, सल्लाहाकारहरु सबै सँग छलफल गरेर, लिडरहरु सँग पनि छलफल गरेर एक प्रकारको वातावरण श्रृजना गरेर अगाडि बढ्छौं ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यथास्थानबाट मतदानको व्यवस्था गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यन्वयनका लागि दवाव दिन पार्टीले जनसम्पर्क समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
विदेशमा बस्ने नेपाली जसले नेपालको नागरिकता त्यागेका छैनन् । विदेशको नागरिकता लिएका छैनन उनीहरुलाई नेपालमा हुने निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । तर सरकारले अहिले सम्म त्यसका लागि कुनै काम गरेको छैन । त्यसमा दवाव श्रृजना गर्न विदेशमा रहेका ३४ वटा जनसम्पर्क समितिलाई आफ्ना देशमा रहेका दुतावास ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो निर्णय अनुसार जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले आगामी बिहिवार वासिङ्गटन डिसी स्थित दुतावासमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाउदै छौं ।
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १४:०७ मा प्रकाशित